Vaovao - Tena akaiky ny Fetin'ny Lohataona Sinoa, manidina avy eto Aostralia i Johan sy Jason
Tena akaiky ny Fetin'ny Lohataona Sinoa, manidina avy eto Aostralia i Johan sy Jason
Tena akaiky ny Fetin'ny Lohataona Sinoa, manidina avy eto Aostralia i Johan sy Jason. Fotoam-pahavaratra izao any Aostralia izao, manao T-shirt fohy fohy izy ireo ao anaty palitao matevina. mitondra fanomezana mafana be ho antsika izy ireo, tetik'asa lehibe io!
Nandritra ny telo andro nivezivezena teto, dia niresaka lalina tamin'ny antsipiriany momba ilay tetikasa lehibe izahay, nampiditra ny fikirakiranay ny milina sy ny milina ny injenieranay, nampiseho ireo mpamatsy sy milina havanay, anisan'izany ny milina vaovao namboarina ho an'ity tetikasa ity, nanipika ny fizotrany sy ny masontsivana lehibe . Ny fahalalantsika tsara ny tetikasa dia mampiadana sy afa-po ny mpanjifanay. Milamina be ilay dinika, natao ho an'ny toeram-pitrandrahana goavambe any Aostralia, hanao amponga magnetika betsaka isika hanoloana ireo efa tonta.
Ny amponga magnetika dia iray amin'ny vokatra mahazatra an'ny Stamina, ampiasaina amin'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany io, ny roller lehibe misy andriamby mahery eo amboniny, tena sarotra sy mampidi-doza ny manangona ireo andriamby, soa ihany fa manana traikefa betsaka amin'izany isika. Ny dingan'ny welding sy ny milina dia matotra tokoa, ny asan'ny fivoriambe misy andriamby lehibe 2000 mahery dia mahomby sy avo lenta.
Natao sonia iray andro monja talohan'ny fetin'ny lohataona Sinoa ny fifanarahana, samy faly sy faly ny andaniny roa, voavaha ny fanontaniana rehetra ary resy ny olana ara-teknika rehetra. Johan sy Jason dia matoky antsika tokoa, ny Stamina dia nanolotra karazana vokatra marobe ho azy ireo nandritra ny taona maro, miaraka amin'ny vidiny mirary sy ny kalitao avo lenta. Mino izy ireo fa hanana asa tsara amin'ity tetikasa ity i Stamina, na dia sarotra be aza izany.
Ny taona 2020 dia toa taona iray manokana ho antsika, nanomboka ny fialantsasatry ny fetin'ny lohataona ny mpiasanay tamin'ny alin'ny taona vaovao, somary tara io, saingy feno hafaliana sy fanantenana isika rehetra. Na izany na tsy izany, fiandohana tena tsara izy io.